Fifidianana · Jolay, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Jolay, 2011
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Jolay, 2011
Goatemalà : DipuKids, Andia Tanora Vaovao Kandidà Kongresy
Amerika Latina 29 Jolay 2011
Ny ady an-trano tao Goatemalà tamin'ny (1960-1996) izay namono sy nandefa an-tsesintany ireo tanora mpitarika sy ireo mpianatra ambaratonga ambony marobe manana ny ho avy tao amin'ny firenena, no nampisy fahabangana lehibe teo amin'ny tontolo politika. Hatramin'ny nanaovana ny sonian'ny Fifanekem-pandriampahalemana teo amin'ny Goatemalteka tamin'ny 1996 dia nijanona ho ambany dia ambany ny...
Shina: Mpisolovava Manohana Kandidà Noraràna Tsy Hilatsaka Ho Fidiana
Azia Atsinanana 17 Jolay 2011
Mitaha amin'ireo olona marobe milaza ny filatsahany ho fidianana tamin'ity taona ity ho fidiana ao amin'ny Antenimieram-bahoaka, ho tantara iray izay mbola tena misarika ny sain'ny maro ny an'i Liu Ping ao Jiangxi , izay nilahatra tamin'ireo kandidà roa hafa , saingy tsy navela hilatsaka tamin'ny fifidianam-paritra
Azia Atsinanana 16 Jolay 2011
Ny kandidàn'ny mpanohitra Yingluck Shinawatra no vehivavy Thailande voalohany ho tonga eo amin'ny toeran'ny Praiminisitra, noho ny nahazoan'ny antokony Pheu thai seza maherin' ny 260 tamin'ny fifidianana natao androany (03 Jolay 2011).
Meksika: Fanehoan-kevitra Taorian'ny Fifidianana Tao Meksika
Amerika Latina 16 Jolay 2011
Ny 3 jolay 2011, nandeha nandatsa-bato ireo mponin'i Meksika hifidy izay mety ho Governora manaraka, ny tambajotram-piarahamonina sy ireo filazam-baovaon'olon-tsotra no nampiasaina hifanakalozan-kevitra itaterana indrindra ny hevitra samihafa mikasika ny fizotry ny fifidianana, fanampin'izany ny antony sy ny vokatry ny fandresen'ny kandidàn'i PRI Eruviel Ávila.
Tonizia: Manomboka ny fisoratana anarana hifidy, Tatitra olana ara-teknika
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 15 Jolay 2011
Nanomboka nisoratra anarana tao amin'ny lisi-pifidianana ny Toniziana ny andron'ny 11 jolay. Hitohy hatramin'ny 2 aogositra moa izany fisoratana anarana izany. Heverina ny handrotsa-bato hifidy ny antenimieram-panorenana, izay hanoratra ny Lalampanorenana vaovao, manko ny Toniziana amin'ny 23 Oktobra ho avy izao. Efa misy sahady ny mitatitra ny fisian'ny olana ara-teknika.
Malezia: Tsakoahan'ny fihaonambe Bersih 2.0 ny governemanta
Azia Atsinanana 14 Jolay 2011
Ny nananganana azy dia ny hisian'ny fanavaozana ny lalam-pifidianana saingy ilay fihaonambe goavan'i Malezia Bersih naparitaky ny polisy tamin'ny fomba mahery vaika dia niofo ho hetsika politika mampanahy ny fitondrana sy ny fahamarinan-toerany. Bersih ankehitriny no iantsoan'ny ankamaroan'ny olona any Malezia ny revolisiona
Malezia: Maro Indray no Voasambotra Talohan'ny Fikarakaràna Famoriam-Bahoaka
Azia Atsinanana 11 Jolay 2011
Marobe be indray izao ny olona nosamborina noho ny fanohanana ny Famoriam-bahoaka Bersih 2.0 izay nokasaina hatao ny 9 Jolay 2011. Ny sasany nosamborina fotsiny satria hoe nitafy ankanjo bà Bersih. Ny famoriam-bahoaka Bersih, izay nambaran'ny governemanta fa tsy ara-dalàna, dia nokarakaraina hitakiana fifidianana mangarahara sy madio.
Frantsa-Senegal: Nosamborin'ny Polisy Frantsay Ireo Mpanao Fihetsiketsehana Tsy Mankasitraka An'i Wade
Afrika Mainty 10 Jolay 2011
Manomana ny fifidianana ny ho filoham-pireneny i Senegal ny Febroary 2012. Valo volana tsy hahatongavan'ny latsabato, ny fiarahamonim-pirenena dia efa manohitra sahady ireo zavatra kotrehan'ny filoha, Abdoulaye Wade izay efa 85 taona, mba hiverenana eo amin'ny fitondrana indray.
Malezia: Fandrarana famoriam-bahoaka mitady fifidianana madio
Azia Atsinanana 07 Jolay 2011
Averina indray ny famoriam-bahoaka lehibe Bersih tao Malezia tamin'ny taona 2007. Bersih (Vondrona ho an'ny fifidianana marina sy madio), ONG mpitolona maleziana, no mikarakara ny Bersih 2.0, izay fantatra fa atao amin'ny 9 jolay 2011, ka hisy ny filaharambe ataon'ireo mpiaro ny fifidianana madio manerana an'i Kuala Lumpur alohan'ny hanomezana...